Ity Bear mainty aziatika ity dia tia ny Omelet, Facebook ary ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Ity Bear mainty aziatika ity dia tia ny Omelet, Facebook ary ny fizahantany
Travel Travel • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Khao Yai bera mainty manaraka ny orony
Tao amin'ny toeram-pivarotana sakafo iray any amin'ny hantsam-bato Pha Trom Jai ao amin'ny valan-javaboary Khao Yai, nisy horonantsary bera mainty aziatika nanintona ny fofon'ny omelette mahandro.
Ny hany nilaina dia ny olona iray izay naka ny orsa tamin'ny alàlan'ny horonantsary handefa azy io amin'ny tambajotra sosialy mba hahatonga ny mpizahatany hanao ilay tranonkala ho ampahany amin'ny drafi-pandringany.
Betsaka ny mpizahatany tonga fa ny lehiben'ny valan-javaboary dia tsy maintsy nametra ny isany tao amin'io faritra io indray mandeha.
Fantatra tsara i Khao Yai satria naseho tamin'ny sarimihetsika Leonardo Dicaprio, "The Beach."
Mpizahatany maro no nankany amin'ny hantsam-bato Pha Trom Jai, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nilaza fa nahita lahatsoratra tao amin'ny Facebook momba ny bera mainty aziatika iray izay voasariky ny omelette teo amin'ny fivarotana sakafo teo amin'ny hantsana, ary fantatr'izy ireo fa malaza ilay hantsana toerana tsara tarehy mandritra ny vanim-potoana orana, ka nanapa-kevitra izy ireo ny hanao an'io andro io.
Ny sarin'ilay bera mainty aziatika dia niparitaka toy ny afo mandoro ary nanjary “Khao Yai Fever”, hoy Andriamatoa Adisak Pusitwongsanuyut, sefom-pirenena Khao Yai National Park.
Nilaza izy fa nanao ny hetsika hamerana ny mpitsidika ny harambato izy ireo rehefa nahita ny fitomboan'ny mpizahatany nanintona an'io tranonkala io.
Mametra ny isan'ny mpitsidika ny toerana ao amin'ny valan-javaboary ny sefo satria ny "Khao Yai Fever" ao amin'ny media sosialy dia mitaona ny olona hidina ao amin'ilay toerana fizahan-tany voajanahary ary noho ny firongatry ny olona, ​​dia miteraka ahiahy amin'ny mety hisian'ny Fivoahan'ny COVID-19.
Teo amin'ny hantsam-bato dia voafetra ho 30 ny isan'ireo fiaran'ny mpitsidika, ny an'ny môtô mpitsidihany dia 50, ary ny bisikiletin'ny mpitsidika dia 30 indray mandeha, hoy izy, ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Amin'ny faran'ny herinandro sy fialantsasatra ampahibemaso, izay matetika mahita mpitsidika marobe, ny ora fisokafan'ny valan-javaboary dia nizara ho fizarana 5 fotoana izay azon'ny tompon'andraikitra eo amin'ny zaridaina atao ny manombatombana sy manapa-kevitra amin'izay fotoana mety ho isan'ny fiara avela isaky ny slot.
I Khao Yai dia ora avaratra atsinanan'ny Bangkok ary anisany ilay sarimihetsika "The Beach." Mahaliana fa ny kintan'ny "The Beach," Leonardo DiCaprio, dia nanohy nanamboatra sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe "The Revenant", sarimihetsika momba ny sisin-tany iray tavela ho faty taorian'ny nanotan'ny bera grizzly azy. Andraikitra iray nandreseny ny Oscar voalohany indrindra ho mpilalao mahay indrindra, rehefa avy nanamboatra loka 101 hafa tamin'ny fanendrena 252.
Ity ala sy ahitra an'ny Zaridainam-pirenena Khao yai mandroso 2,000 kilaometatra toradroa ary fantatry ny 50 kilometatra fitsangantsanganana an-tongotra sy bisikileta ary riandrano mahafinaritra.